Models watch | Namastefilmy.com| Nepali Cinema, News, Gossip ,Articles, Interview, Celebrity, Photo, Songs, Video, More...
Home >> Models watch
बेली डान्सर बिनु शाक्य कमलको बेहुली बन्दै
पछिल्लो समयकी लोकप्रिय बेली डान्सर बिनु शाक्य बेहुली बनेकी छिन् । बिशेष गरी स्टेजमा आफ्नो बेली डान्सबाट दर्शकको मन जितेकी बिनु भिडियोका लागी मोडल कमल सिंहको बेहुली बनेकी हुन् । उनलाई बेहुली बनाउने काम निर्देशक सोनम पाख्रिनले गरेका हुन् ।
राजेन्द्र डंगोलको स्वर रहेको ‘कान्छि हे कान्छि’ बोलको डान्सिङ गीतमा कमलले बिनुलाई बेहुली बनाएर भित्राएका हुन् । कृष्ण भक्त महर्जनको शब्द, संगीत रहेको गीत हरी शरण सायामीले एरेन्ज गरेका छन् । सुरेन्द्र बसेलले कोरियोग्राफि गरेको उक्त भिडियो उत्सव दाहालले खिचेका हुन् ।
ललितपुरको फर्पिङमा सोमबार भएको सुटिङमा केहि कोरस डान्सरसँगै बेली डान्सर बिनुले गुनियो चोली लगाएरै पनि नृत्य गरेकी छिन् । आफूलाई बेली डान्सरको रुपमा चिन्दै आएका दर्शकका लागी यो भिडियो फरक हुने उनी बताउँछिन् । ‘कतिपय दर्शकले मैले बेली डान्स मात्र गर्छु भन्ने बुझ्नुहुन्छ उहाँहरुका लागी यो भिडियो फरक हुनेछ, यसमा कुर्ता सुरुवाल र गुनियो चोली पनि लगाएकी छु’ बिनुले भनिन् ।
यस्तै म्युजीक भिडियोमा पहिलो पटक बिवाहको दृश्य दिएकी बिनु भन्छिन् ‘अहिले सम्मको म्युजीक भिडियोहरुमा बिहे गरेकी थिइन्, म्युजीक भिडियोका लागी पनि यो मेरो पहिलो म्युजीक भिडियो हो, नयाँ अनुभव गरेँ ।’यस्तै मोडल कमलले पनि बिवाहको दृश्यमा नयाँ अनुभव भएको बताए ।
साथै उनले डान्सर बिनुको तारिफ पनि गरे । ‘बेली डान्सर भनेर चिनिराखेको बेली भन्दा फरक गीतमा पनि राम्रो नृत्य गर्नुहुदो रहेछ’ कमलले भने । भिडियोका निर्देशक सोनमले गीतको शब्द अनुसार कमल र बिनुको बिहे गराइदिएको बताए । भिडियो यसैसाता भित्र बजारमा आउने निर्देशक सोनमले जानकारी दिए ।
हेर्नुहोस् कस्ती देखिईन् बेहुली हुँदा ,,,,,,
चलचित्र पंचायत के हो किन हेर्नु पर्छ (फोटो फिचर )
प्रथा वा कु–प्रथा । जस्तोसुकै ऐतिहासिक घटना आफैंमा एउटा पहिचान हो । सकारात्मक कथा समाजले अनुशरण गर्दै जान्छ, नकारात्मक कथा परिवर्तन हुन्छ ।
त्यही कालो समय भित्रको ‘कालो संसार’ धेरैलाई थाहा हुँदैन । कथा, कविता, उपन्यास, चलचित्र, नाटकमार्फत पर्दा उघारिन्छ । त्यसैको एउटा विम्ब हो चलचित्र ‘पंचायत’ । नामै काफी छ ।
२०४६ साल अघि त्यस्तै एउटा कालखण्डा थियो पञ्चायती व्यबस्था । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विपी कोईरालालाई अपदस्त गरी पञ्चायती शासन थाले । जुन व्यबस्थालाई इतिहासको कालो काल सम्झिने गरिन्छ ।
पञ्चायती शासनको उग्रसमय २०३१ सालतिरको एउटा गाउँको कथा निक्कै रोचक छ । जसलाई चलचित्रकर्मीहरुले पर्दामा उतार्ने प्रयास गरे । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा भएको ‘सान्फ्रान्सिस्को फिल्म फेस्टिभल’मा विदेशी भाषाको २१६ वटा चलचित्रलाई उछिन्दै उत्कृष्ट अवार्ड पाएको चलचित्र पंचायत आगामी चैत २मा देशै भर प्रदर्शन हुँदैछ । चलचित्रकी नायिका नीता ढुंगानाले समेत उत्कृष्ट नायिकाको अवार्ड पाउनु नेपाली सिने–उद्योग कै लागि एउटा गरिमा हो । नेपाल र नेपालीको पहिचान विश्वसामु चिनायो भन्दा फरक पर्दैन ।
व्यापारिक सफलता पाउला नपाउला । ‘तर पंचायतले इतिहास साछी राख्ने काम भने पक्कै गर्छ, चलचित्रका निर्माता शुसान्त श्रेष्ठले भने, अमेरिकाको अवार्डले नै संकेत दियो, एकपटक इतिहासलाई बर्तमानमा ल्याउन पाउँदा खुसी छौं ।’
पछिल्लोपटक सती प्रथामा केन्द्रित चलचित्र ‘झोला’ बन्यो । लागेको थिएन झोलालाई दर्सकले खुबै मन पराउँछन् । तर दर्शकले अथाह मायाँ दिए । सफलता लुकेन । पंचायत पनि यस्तै नहोला भन्न सकिन्न ।
नेपालमा विदेशी चलचित्रको आयात बढ्दो छ । हास्यव्यंग्य र ख्यालठट्टाका कथाहरु विकेका देखिन्छन् । के हाम्रो इतिहास विक्नु पर्दैन, नयाँ पुस्ताले त्यो कालखण्ड हेर्नु र जान्नु पर्दैन ? कला संस्कृति र व्यबस्थाको बारेमा आम–नेपालीले बुझ्नु जरुरी छैन ?
‘ति दर्शकहरुका लागि हो ‘पञ्चायत’, जसले त्यो कालखण्डको पत्याउनै नसकिने इतिहास हेर्न पाओस्,’चलचित्रका लेखक तथा निर्देशक शिवम अधिकारी भन्छन् ।
सातवर्ष अघि बनेको स्किृप्ट आज आएर पर्दामा उतार्नु चानचुने कुरा होईन । अधिकारी भन्छन्, ‘निर्माताले नेपाली पहिचान चिनाउने आँट गरेकाले सात वर्षपछि भएपनि फिल्म बन्नु आफैंमा इतिहास हो ।’
दर्शकले झोलापछि मौलिक नेपालीपनको चलचित्र हेर्न पाएका छैनन् । त्यो भोक अब पंचायतले मेटाउने छ । ‘पचास वर्ष अघिको शासनकाल जुन आफैंमा एकतन्त्रिय थियो । ‘त्यसभित्रको नदेखिएको र नलेखिएको कथा पंचायतमा छ’, प्रस्तुतकर्ता गणेश गिरीले भने, नेपालीपन, मौलिकता र पुरानो व्यबस्थामा आधारित चलचित्रलाई दर्शकले पक्कै न्याय गर्नुहुन्छ ।’
के छ त त्यस्तो नौलो कुरो रु त्यो हेर्नचाहिं चैत २ नै पर्खनुपर्ला । तर ट्रेलरमा देखिएका दृष्यहरुले वास्तवमै मौलिकता र पुरानो सामाजिक संरचनालाई उजिल्याएको छ । सम्बादको भाषा र दृष्यले सामाजिक व्यबस्थाले एउटा छनक दिन्छ । न्यायकर्ताको भूमिका र अवोध चेलीहरुका दर्दले मन छुन्छ । छाउपडी प्रथा र पहिलो महिनावारी हुँदा चेलीले सहनुपर्ने त्यो जकडिएको कथित चलन र त्यसमाथि पर्ने अर्काे बज्रपात के थियो ? यसैमा चलचित्र केन्द्रित भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
एउटा गाउँको मुखियाको निसाफ साँच्चै सफा थियो कि धुमिल । यस्तै यक्ष प्रश्नको उत्तर पंचायतको पर्दामा देखिने छ । कार्यकारी निर्माता रवि अधिकारी नेपाली कला संस्कृति, परम्परा र सामाजिक व्यबस्थालाई विश्व सामु चिनाउने अर्गानिक फिल्म पंचायत हो भन्छन् ।
‘आखिर यो पंचायतले पनि हेरोस् मेरो मृत्युको तमासा’ एउटी चेली त्यो बेलाको अग्नि परिक्षामा होमिनुअघिको अन्तिम बाक्य झै लाग्ने ट्रेलरको सम्बाद आफैंमा कारुणिक छ ।
हुन त निर्माण टिमले व्यवसायिक सफलतासँग जोडेर चलचित्र नबनाएको बताउँदै आएका छन् । सात वर्षदेखि कुनै निर्माताको आँखामा नपर्नुले पनि त्यो संकेत गर्छ । यसपटक पहिचानका लागि जोखिम उठाउने आँट गरेका छन् निर्माण टिम र कलाकारले
मुख्य भूमिकामा रहेका नायक सरोज खनाल भन्छन्, ‘इतिहास बोकेकाले आफुले एकसुको पनि नलिई चलचित्रमा खेलेको हुँ ।’ उनकै सहभागितामा अमेरिकामा प्रदर्शन हुँदा दर्शकले अत्याधिक मनपराएको र अझै प्रदर्शनको माग भैरहेको खनाल बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘यो चलचित्र नीताकै लागि सात वर्ष कुर्यो, निता कै लागि लेखिएको कथा हो, अरुबाट न्याय हुँदैनथ्यो ।’
चलचित्रमा यौन मनोभाव र रसरंगले समेत भरिएको छ । ‘आईमाईको ज्याना कुनी के जाति हुन्छ रे है, त्यो हेर्नलाई ढिटाहरु जे नी अर्न तयार हुन्छन् रे क्या ।’ यो सम्बादले पनि किशोरावस्था झल्काउँछ ।
‘चलचित्र मसानपछि सबैभन्दा बढी तारिफ पाएको चलचित्र पञ्चायत हो, जसले मलाई विश्वकै उत्कृष्ट अवार्ड दिलायो, फिल्मले कस्तो भाव बोकेको छ भन्ने त्यसैबाट झल्किन्छ,’ नायिका नीता फिल्मबारे भन्छिन् ।
पश्चिम पहाडी जिल्ला बाग्लुंगको पनि २,३ घण्टा हिंडेर पुग्ने ठाउँ बलेवाको एउटा गाउँमा एक महिना लगाएर चलचित्र छायांकन भएको थियो । पुराना घर नपाउँदा निर्माण टिमलाई समस्या मात्रै परेन लगानी गरेर घर निर्माण गर्नुपरेको थियो । स्थानिय गाउँलेको अपार सहयोग विना चलचित्र निर्माण सम्भवै नभएको कार्यकारी निर्माता अधिकारी अनुभव सुनाउँछन् । कलाकारहरुले समेत जस्तो परिस्थिति आएपनि सामना गरेर फिल्ममा योगदान गरेका उनले बताए ।
युट्यूवमा सार्वजनिक भएको ट्रेलर यो समाचार बनाउँदासम्म २ लाख ६ हजारले हेरिसकेका छन् । ट्रेलरमा सकारात्मक प्रतिक्रिया आउनु सकारात्मक संकेत हो ।शंकर सुवेदीको समेत लगानी रहेको पंचायतमा नायक सरोज खनाल, नायिका नीता ढुंगानासँगै रुपा राना, जाहान्वी बस्नेत, गीता अधिकारी, गणेश गिरी, विशाल पहारी, राजुबाबु श्रेष्ठ लगायतको अभिनय छ ।चलचित्रमा रंग पत्रकार रबि अधिकारी कार्यकारी निर्माताको रुपमा रहेका छन्।
दिपुको रोमान्टिक गीत ‘वि माई भ्यालेन्टाईन’ सार्वजनिक(भिडियो)
प्रेम दिवस (भ्यालेन्टाईन डे) नजिकिंदै गर्दा दिपु न्यौपानेले रोमान्टिक गीत ‘वि माई भ्यालेन्टाईन’ गीत ल्याएका छन् ।
सङस् नेपालको यूट्यूव मार्फत सार्वजनिक भएको ‘वि माई भ्यालेन्टाईन’ सार्वजनिक गरिएको छ । दिपुकै स्वर तथा सुनिल थापाको म्यूजिक रहेको उक्त गीतको एरेन्जर फडिन्द्र राई छन् । अमृत केसी र स्नेहा शर्माको फिचरिङरहेको गीतको सहायक निर्देशकमा पनि अमृत केसी नै छन् ।
श्रीराज ईन्टरटेनमेन्टको उत्पादन रहेको गीत राजीव बलामीले निर्देशक गरेका हुन् । भ्यालेन्टाईन जोडीका लागि उक्त गीत उत्कृष्ट हुन सक्छ ।
युगल जोडीको साँचो प्रेमको बास्तविक कथा गीतमा उनिएको छ । भ्यालेन्टाईन केक काटेर उनीहरुल गुलाफ साटासाट गरी उनीहरुले औंठी साटेरै भ्यालेन्टाईन मनाएको दृष्य फिचरिङमा छ ।
‘जात मिल्दैन धर्म मिल्दैन, हेर त तिम्रो मेरो मन कति मिलेको : ‘श्रीमान वीरबहादुर’(फोटो कथा )
जात मिल्दैन धर्म मिल्दैन, हेर त तिम्रो मेरो मन कति मिलेको ।’ नाटक ‘श्रीमान वीरबहादुर’मा गुञ्जिएका यी शव्दहरुले स्मृतिमा झट्ट एउटा सामाजिक चित्र बन्न पुग्छ ।
मदन पुरस्कार प्राप्त रामलाल जोशीको कथासंग्रह ‘ऐना’ भित्रको कथा ‘श्रीमान वीरबहादुर’लाई कर्मी नाट्य समुह चितवनले पहिलो पटक चितवन जिल्लामा नाट्य रुपान्तरण गरी प्रस्तुत गरेको हो ।
पौराणिक कथानुशार परिबन्धमा परेकी महिलाहरुलाई पुज्ने आजको समाजले त्यस्तै परिबन्धमा परेकी महिलाहरुको वास्तविकतालाई किन स्वीकार्न सक्दैन ? । नाटक यही सेरोफेरोमा केन्द्रित छ ।राजनसँग प्रेममा परेपनि प्रेमलता ठकुरी गर्भवती हुँदा ऊ बेपत्ता हुन्छ । बच्चा जन्मेपछि कुमारी आमा भनेर समाजले उनलाई तिरस्कार गर्छ । त्यती मात्रै होईन, थारुको छोरासँग विहे गरेको भनेर अर्काे पिडा सहनुपर्छ । ठुलाठुला शिर्षकमा समाचार छापिंदा ती नारी विक्षिप्त हुन्छिन् ।
कलाकार तथा निर्देशक भिष्मराज जोशीले उक्त कथााई नाट्य रुपान्तरण गरेका हुन् । सातवटा नाटक खेलिसकेका कलाकार जोशीले हालै प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र फिर्केमा समेत अभिनय गरेका छन् । यो उनको पहिलो नाट्य निर्देशन हो ।‘अहिलेको समयमा पनि विभिन्न समस्यामा परेका महिलाहरुलाई हेयभावको दृष्टिकोण यथावत छ, त्यसैले यो नाटक छनोट गरेको हो ।’ जोशीले थप्नुभयो,‘नाटकमा सुदुर पश्चिमको माटो मिसिएको पाउँछु, देखिरहेको घटना र पात्र छ ।’
चितवनको नारायणी कलामन्दिरमा बुधबारदेखि १ र ४ बजे दैनिक २ पटक प्रदर्शन शुरु भएको नाटक चारदिनसम्म छल्ने छ । पश्चिम नेपालको कैलालीका विरबहादुर थारुको कथालाई नाटकमा उनेको छ ।गरिव परिवारका विरबहादुर रिक्सा चलाउने, ज्यालामजदुरी गर्ने काम गर्छन् । सम्भ्रान्त ठकुरी परिवारकी प्रेमलता वीचको नाटकिय सम्बन्ध हुन पुगेको छ । अन्तरजातिय भएपनि एकअर्कामा दुखसुख साट्ने उनीहरुको प्रेमिल जोडी लोभिंदो छ ।
तैपनि समाजले स्वीकार्न सकिरहेको छैन । सामाजिक कु–दृष्टिकोणलाई नाटकले जीवन्तता दिन खोजेको छ ।कथानुसार राजनसँग प्रेम सम्बन्धमा परेकी प्रेमलताको पेटमा गर्भ रहन्छ । उनी प्रसव पिडामा हुँदा राजन बेपत्ता हुन्छ । छिमेकी वीरबहादुरले उनलाई अस्पताल लान्छ । बच्चा जन्मिएपछि अस्पताले श्रीमान नै सोचेर बाबुको नाम विरबहादुर र आमाको नाम प्रेमलता राखिदिएको हुन्छ । प्रेमलता छक्क पर्छिन् । पत्रकारहरुले वास्तविकता नबुझी कुमारी आमाको बच्चा भनेर ठुला हेडलाईनमा समाचार छापेपछि उनीमा घृणा जाग्छ ।
समाचार संकलनमा पुगेका पत्रकारलाई प्रेमलता आक्रोस पोख्छीन् ‘पटकपटक म तपाईको समाचारको हेडलाईन बन्न सक्तिन ।’ उनको वास्तविकता थाहा पाएपछि समाचार लेख्न पुगेको पत्रकार आफैं हिनताबोध हुँदै फर्कन्छ ।
‘धर्तिको कुनै कुनामा फिरफिराईरहेको सेतो कागजमा कुनै दिन मेरो कथा भेटिन सक्छ, तर आमाको कथा कुनै कागजमा लेख्न सकिंदैन, आँशुको मसिले हृदयको पानामा मात्रै लेख्न सकिन्छ ।’ पत्रकारको भनाईसँगै नाटकको अन्त्य हुन्छ । नाटक ५० मिनेटको छ ।बरिष्ठ कलाकार ऋद्धिचरण श्रेष्ठ सुत्रधारबाट नाटकको कथा बगाउनु साह्रै राम्रो हो भन्नुहुन्छ । पौराणिक र आधुनिकतालाई जोडेर जीवन्त बनाउनु प्रशंसनिय रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । नाटकमा पौराणिक कथा अनुसार कुन्ति र सत्यवतीको कथासँग आधुनिक सत्य कथा जोडिएको छ ।
त्यो बेला यस्तै पिडा खेप्न विवस महिलालाई आजसम्म पुज्ने समाजले परिबन्धमा परेर पिडा खेपिरहेका नारीहरु तिरस्किृत किन हुन्छन् ? समाजको यही नकारात्मक दृष्टिकोण नाटककी मुख्यपात्र प्रेमलताबाट बारबार बोलिरहेको हुन्छ ।‘ठकुरीकी छोरीले थारुलाई पोई बनाई भनेर समाचार नबनाईदेउ, तिम्रो जागिर भन्दा मेरो अधिकार ठुलो हो ।’ समाचार लेख्न आएको पत्रकारसँग प्रेमलताले गरेको सम्बाद मर्मस्पर्शी छ । अनि पत्रकारको हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन भएको छ ।
गाउँका युवाहरुले तिहारको देउसीबाट संकलन गरेको रु ५० हजार रकमबाट नाटकको जग तयार भएको हो । कर्मी नाट्य समुहका अध्यक्ष मुकुन्द खलपात्र कार्तिकदेखिको पुरा भएको उल्लेख गर्दै सबैको हार्दिकतालाई धन्यवाद दिनुहुन्छ । ठुलो संघर्ष र आर्थिक अभावका वीच नाटक मञ्चन भएको भन्दै उहाँले आएको आम्दानी थियटरका लागि जग हुने बताउनुहुन्छ ।
चितवनको पछिल्लो सफल नाटक ‘सकस’ भन्दा प्रस्तुतिकरणमा फरक रहनु यसको विशेषता हो । तीन घण्टामै नाट्य रुपान्तरण गर्न सफल बनेका निर्देशक जोशीले ३० पटक संसोधन गरेको र १७ जना कलाकार परिवर्तन गरेको अनुभव सुनाए ।कतिपय कलाकारले धोका दिए । यसअघि नारायणी कलामन्दिरले नाटक गर्ने भनेपनि सफल नभएकाले कतिपयले विस्वास नै गरेनन् । वीरबहादुर बनेर जीवन्त अभिनय गरेका कलाकार सुरेश जिशी, राजधानी र मोफसलमा कला प्रस्तुत गर्नु उस्तैउस्तै भएपनि प्रविधिमा समस्या हुने उल्लेख गर्नुहुन्छ ।
उनी शिल्पी थिएटरका नाट्य कलाकार समेत हुन् । सुरेश जिशी र कृपा अधिकारी मुख्य भूमिकामा रहेको नाटकमा अन्जान ढुंगानाले जोड्ने काम गरेका छन् । अन्य कलाकारहरुमा भिष्म जोशी, विवेक तिवारी, सुमित आचार्य, अस्मिता थापा लगायत छन् ।
Model Watch : Anil Adhikari
Name: Anil Adhikari
Address: Ratnanagar, Chitwan
Hobbiess: Acting, Modeling, Business
Played Movie : Mero Manchhe
Played vedio: Bidesh-Netraji Panta, Maya Prem Sikaune Master-Tejas Regmi, Thauko Thau(teej song)-Tejas Regmi
रंगपत्रकार रवि अधिकारी बने गीतकार तथा मोडल ।
चितवनमा रहेर रंगपत्रकारीता गरिरहेका रवि अधिकारी कलाकारितामा होमिएका छन । उनले यसै साता एक म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गरे ।
काठमण्डौ, दामन, पालुङ लगायतको रमणिय स्थानमा खिचिएको मेरो भागको खुशी नि तिमीलाई मिलोस बोलको गीतमा उनले अभिनय गरेका हुन । गीतमा उनले मोडल सुजाना ढकालसँग अनस्कृन रोमान्स गरेका छन । गीतको शब्द पनि रवि आफैले लेखेका हुन ।
रविकै शब्दमा टंक बुढाथोकीको स्वर तथा सँगीत रहेको गीतको छयांकन गत शनिबार र आइतबार गरिएको थियो । रवि र सुजानासँगै बिक्रम कँडेल पनि भिडियोमा छन । भिडियोलाई फिल्म निर्देशक शोभित बस्नेतको निर्देशनमा कृष्ण श्रेष्ठले खिचेका हुन । सधै अरुको अभिनय हेर्ने र समाचार लेख्ने मान्छे अहिले आफै अभिनयमा होमिंदा नौलो अनुभव लागिरहेको रवि बताउछन । उनले अबका दिनमा कलाकारितामा नै केहि गर्ने र अभिनयबाटै दर्शकमाझ चिनिने चाहना रहेको सुनाए । उनले आफ्नो अभिनयलाई दर्शकहरुले रुचाउनेमा आशावादी रहेको बताए ।
त्यसो त उनले यसअघि पनि एक म्युजिक भिडियो र फिल्ममा समेत काम गरिसकेका छन । उनी अभिनित फिल्म ‘नागरिक’ प्रदर्शन हुन बाँकी छ ।
अहिले पनि केहि फिल्महरुबाट अफर आइसकेको र मन परेको भुमिकामा अभिनय गर्ने उनले बताए ।
रवि फिल्मी पोर्टल नमस्तेफिल्मी डटकम र नमस्तेफिल्मी अनलाईन रेडियोका सञ्चालक हुन ।
Model watch: Kabita Ghising.
Name: Kabita Ghising
Hobbiess: Acting, Modeling
Played vedio: Kasari ma chitta bujhau, Maya garne jodi, Birano bho basne bas.
Model Watch:kishor khadka
Name: kishor khadka .
Address: udayapur, beltar
Study: bbs 2nd years
Hobby :- dancing, acting
Played Movie: man manma
Model watch: Sagar Neupane
Name: Sagar Neupane
Address: Bharatpur-10, Chitwan
Hobby- acting, playing vollyball
Played vedio: kina khoj6, kasailai yo boli, ma ta foolko bato, pal pal timrai yaadma, yeti dherai maya
Model Watch: Susmita Shahi
Name: Susmita Shahi
Address: Rajahar, Nawalparasi
Date of Birth: January, 1996
Study: Hotel Management(+2)
Played Movie: Fullstop, Zanjeer, Teacher
Upcoming Movie: Punarjanma